BUKA: Ifoni entsha sha yakwa-KFC ‘econsisa amathe’ | News24
BUKA: Ifoni entsha sha yakwa-KFC ‘econsisa amathe’
Johannesburg – Isitolo esiyintandokazi emhlabeni wonke nesidume ngokudayisa inkukhu ethosiwe, u-KFC, usewethule ama-smartphone ayisibalo esikaliwe (limited edition) nashaya ngobuchwepheshe bokusebenzisa umunwe uma ngabe uwavula (fingerprint scanner).
Lo makhalekhukhwini, ogqize ngombala obomvu u-KFC odume ngawo, wakhiwe ngokuhlanganyela nenkampani eyakha omakhalekhukhwini, iHuawei, kanti uzodayiswa kuphela eChina.
I-fingerprint scanner engajwayelekile yale foni ibekwe ngemuva, ngaphezudlwana nje kancane kwekhanda lodumo "lwekhehla eligqoke izibuko" eliwuphawu luka-KFC. Lo mlisa ogqoke izibuko ngu-Colonel Harland David Sanders kanti nguyena owasungula lezi zitolo esiyintandokazi zakwa-KFC. Kodwa-ke u-KFC awuzange ukudalule ukuthi i-fingerprint scanner yale foni izosebenza yini uma ngabe iminwe isigcwele amafutha amakhasimende esezitika.
Bangu-5 000 nje kuphela omakhalekhukhwini abazokhishwa kuleliya lizwe njengengxenye yokugubha kwale nkampani iminyaka engu-30 yasungulwa esitolo sayo sokuqala esiseChina.
OLUNYE UDABA:Kubatshazwa ubuhlakani befoni yeSony ezobiza ukuwedlula wonke kuleli
Isitayela sale foni sihambisana kakhulu no-KFC. Ngale nje kokuthi le foni ishaya ngombala ohambisana nalesi sitolo, kodwa iphinde ishaye nangophawu lwale nkampani, nokuyisithombe sakhe uColonel Saunders. Le foni ithi ayizishaye safoni ebomvu ye-iPhone 7.
Le foni yakwa-KFC eyi-Huawei Enjoy 7 Plus iyifoni eyenziwe kabusha sekushintshwe lapha nalaphaya kususelwa kwi-smartphone yale nkampani yaseChina eyakha amafoni, iHuawei Y7 Prime. Le foni ishaya ngo-5.5 inch we-screen kanti nezithombe zayo zinhle njengoba ishaya ngo-720x1280 pixel resolution. Iphinde ishaye nangekhamera engu-12 megapixel, i-RAM engu-3GB phakathi kokunye.
Le foni iphinde ishaye nangekhamera engu-8 megapixel engaphambili ukuze ukwazi ukuzithatha isithombe (selfie) uma ngabe usuzitika ngeqatha lakho lenkukhu ethosiwe.
Lo makhalekhukhwini uphinde ushaye nangesikhala esingu-32GB kanti uyakwazi ukusengeza ngokufaka i-microSD card enesikhala esingu-128GB.
I-Huawei Enjoy 7 Plus yakwa-KFC kulindeleke ukuthi ibize u-1 099 yuan (nokuyimali elinganiselwa ku-R2 112).
Zibonele isithombe kanye ne-video yale foni ekhethekile ngezansi: